Musharaxiinta Oo ka Hadlay Kala Saarista Xubnaha Gudiyada Doorashada Ee Laga Cabanayay.(Akhriso) – Awdalmedia
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa War kasoo saaray qaabkii Guddiga xaqiiqo raadinta ah ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble u kala saareen xubnihii Guddiyada doorashooyinka ee cabashada laga soo gudbiyay.
War-saxaafadeed kasoo baxay Midowga ayaa lagu soo dhaweeyay shaqada hordhaca ah oo ay qabteen Guddiga ee kala shaandheynta xubnaha dacwada laga keenay ee guddiyada doorashada heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, si looga saaro xubnaha shaqaalaha rayidka, saraakiisha ciidanka iyo xubnaha Khilaafka ka jiray.
Musharaxiinta ayaa Guddiga xaqiiqo raadinta ah ee Xukuumadda ka dalbaday in si daah-furan u soo bandhigaan habraaca iyo hanaanka loo maray kala saarista xubnaha Guddiyada, si shaqada guddiga ay u noqoto mid keenta xal mira dhal ah.
Sidoo kale Midowga Musharaxiinta ayaa dalbaday in magacaabista xubnaha cusub ee guddiyada doorashada ay noqdaan kuwo loo maray habraac iyo hannaan daah furan oo ku saleysan habraacyadii iyo heshiisyada doorashooyinka.
Halakan Hoos ka Akhriso: